चौ*की आउछु भन्ने शारदा पाण्डेलाई एकाएक कसले लुकायो ? झु*टको ठुलो प्रमाण भेटियो (हेर्नुस भिडियो)
Homeसमाचारचौ*की आउछु भन्ने शारदा पाण्डेलाई एकाएक कसले लुकायो ? झु*टको ठुलो प्रमाण भेटियो (हेर्नुस भिडियो)
November 10, 2019 Spnews समाचार Comments Off on चौ*की आउछु भन्ने शारदा पाण्डेलाई एकाएक कसले लुकायो ? झु*टको ठुलो प्रमाण भेटियो (हेर्नुस भिडियो)
अहिले सामाजिक संजालमा अघोर बाबाको निक्कै चर्चा हुन्छ । उनको हरेक गतिबिधी सामाजिक संजालमा हाँसोका साथ हेर्ने गरिन्छ । अझ बाको बोली गफको निक्कै प्रसम्सकपनि छन् । उनी रमाईला र समसमयइक बिषयमा कुरा गर्न माहिर भएका कारण उनको समर्थनमा धेरै जसो युवा युबती देखिन्छन् । उनै बाबाले बिहे गरेको कुराले धेरै अचम्मित् भएका थिए । कसैले समर्थन गरेका थिए भने कसैले आपत्ति पनि जनएका थिए । अहिले झन उनको श्रीमतीका कुराले झन धेरैलाई अचम्मित गराउने कुरा बाहिरियो ।
उजुरी दिए लगतै उनले पत्रकार सम्मेलन गरि आफुले न्याय पाउनु पर्ने र शारदाले आफ्नो बिबाह दर्ता गरी दिनु पर्ने समेत माग राखेकी थिइन । आफुलाई शारदा पाण्डेले फसाएको भन्दै धरधरी रुदै मिडियामा आएकी हुन् ।
उजुरी हालेपछि एकाएक केहि मिडियाले शारदा पाण्डेको अन्तर्वार्ता लिएपछी प्रहरी चौकी आउछु गल्ति भए जेल जान्छु भन्दै उफ्रेका पाण्डे एकाएक पछी सरेकी छिन । प्रहरीले उनलाई अहिले खोजि रहेको बताएका छन् । यसै बीच बिन्दु न्यौपानेले आफु बिरुद्ध बोलेको अन्तरबार्ताको खण्डन गर्दै पाण्डेको झुट पर्दाफास गरेकी छिन ।
सोमबार बैकुन्ठ चतुर्दशी, यो तिथिमा भगवान शिवले सृष्टिको भार विष्णुलाई सुम्पने
भूमि फिर्ता नल्याए ओलीलाई जनताले माफी दिने छैनन्